DAAWO:Hadal siweyn ugu farxay Saadaq Joon oo kasoo yeeray QM oo ku saabsanaa arin halisteeda leh | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA DAAWO:Hadal siweyn ugu farxay Saadaq Joon oo kasoo yeeray QM oo ku...
DAAWO:Hadal siweyn ugu farxay Saadaq Joon oo kasoo yeeray QM oo ku saabsanaa arin halisteeda leh
Golaha Ammaanka QM ayaa shaaca ka qaaday in wax dambi oo ku saabsan xiriir Al-Shabaab lagu waayey Jeneral Saadaq Cumar Maxamed, oo ah taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya.
Kooxdii hore ee QM u qaabilsaneyd kormeerka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea (Somalia-Eritrea UN Monitoring Group), ayaa ku eedeeyey Jeneral Saadaq inuu xiriir la leeyahay kooxda Al-Shabaab.
Go’aanka Guddiga Khubarada ayaa waxaa sidoo kale soo dhoweeyey dowladda Shiinaha.
Safiirka Shiinaha ee QM, Zhang Jun ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri “Waa mowqifkeena joogtada ah in cunaqabteenada noqdaan kuwa aan laga lahayn ujeedo gaar ah. Talalabo kasta oo guddiga ay qaadaan waa in looga dan leeyahay joogteynta nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, kana fogaadan saameyn kasta oo xun oo ay ku yeelan karto horumarka nolosha iyo hantida shacabka Soomaaliyeed. Codsiyada sharciga ah ee ay sameeyaan Soomaalida waa in la siiyaan dareenka iyo tixgelinta ay mudan yihiin. Waxaan soo dhoweeneynaa sharaxaadda lagu sameeyey eedeymaha ka dhanka ah Jeneral Saadaq Omar Maxamed, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed.”
Previous articleXog: Xildhibaanada cusub ee HirShabelle oo lagu soo rogay lacag 500 oo dollar ah
Next articleXog: Maxaadan ogeyn oo uu Sheekh Shariif ka wadaa magaalada Muqdisho?
Amar adag oo la dul dhigay dadka u xukun doonta Al-Shabaab & Booliska oo..
Wasiirka Maaliyadda afartan Su’aal ha uga jawaabo Shacabka Soomaaliyeed ?
Dowladda Jabuuti oo war kasoo saartay xiisadda kala dhaxeysa Somaliland
Faarax Macallin oo si cajiib ah ciidamada Somalia uga difaacay eedeynta Uhuru
XOG: Ra’iisul Warsaare Kheyre oo Qorshe Halis ah ladamacsan Xildibaan Mustaf Dhuxuloow
DEG DEG:Qarax Aad u xoog badan oo goor dhow kadhacay Muqdisho gaar ahaan…
Madaxweyne Trump oo looga digay inuusan ku dhicin dabin ay Israel u dhigeyso
Dhageyso: Waare oo shaaciyey u jeedo laga lahaa dilka nin 100 jir ku dhowaa
DEG DEG: NISA oo shaacisay in qaraxii Ex-Control uu qorshihiisa lahaa dal shisheeye